MacOS Beta 5, Taa na Apple, gbanyụọ Touch Bar, na ndị ọzọ. Kacha mma n'izu na m si Mac | Esi m mac
MacOS Beta 5, Taa na Apple, gbanyụọ Touch Bar, na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Izu a adịtụwo jụụ na ụwa Apple ma anyị ahụwokwa ọtụtụ akụkọ na-atọ ụtọ na ọtụtụ asịrị ndị ọzọ gbasara iPhone "X" nke na-anaghị akwụsị iru netwọkụ. N'ihe banyere Macs anyị nwere chicha ahụ dị jụụ mgbe okwu Shiller gasịrị, na obere ihe ọzọ. Na nkenke, izu na-achọ ịmata ihe nwere ụdị beta abụọ nke iOS na obere akụkọ karịrị asịrị nke iPhone na-esote. Yabụ taa bụ Sọnde anyị ga-eme ya nwayọ ma anyị ga-eji ụfọdụ akụkọ pụtara ìhè n’izuụka gara aga nke Eprel.
Nke mbu banyere banyere nsụgharị beta nke Apple wepụtara n'izu a. N'otu Monday ahụ ndị mmepe rutere MacOS Sierra beta ụdị nke 4 na enwere mgbanwe ole na ole a na - ahụ anya gba ọtọ karịa mmezi ahụhụ na ihe ndị ọzọ. Ihe na-adọrọ mmasị bụ na Apple ga-abịa n'oge iji wepụta nsụgharị a na nke ọzọ tupu ọnwa June, nke bụ mgbe a ga-ekpughere macOS ọhụrụ na WWDC 2017.
Ozi ọzọ pụtara ìhè bụ mmemme ọzụzụ ọhụrụ na Storelọ Ahịa Apple, “Taa na Apple”. Ndị ọhụrụ a nkuzi nkuzi gbadoro anya na egwu, mmemme, ise foto, vidiyo, imewe wdg. n'ihi ya, ha dị ezigbo mma maka ndị ọrụ ahụ nwere ụlọ ahịa Apple dị nso ma nwee ike ịga ọmụmụ ihe a kụziri ebe ahụ.
Apple emelitere Peeji, Ọnụọgụ na Isi Okwu ya na post-igba egbe arụmọrụ na nche nkwalite niile Apple ngwaahịa ọrụ. Na ụdị ọhụrụ a ahụhụ fixes na Apple Suite nche mma.
Olee otú gbanyụọ Touch Bar nke MacBook Pros ohuru? Ọ dị mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ gbanyụọ akụkụ ọhụrụ a nke MacBook Pro 2016 Maka ihe kpatara ya, anyị na-ahapụrụ gị ụzọ ị nwere ike ịme ya n'ụzọ dị mfe.
Obi ụtọ na Sọnde!
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Apple » ọtụtụ » MacOS Beta 5, Taa na Apple, gbanyụọ Touch Bar, na ndị ọzọ. Best nke izu na m si Mac
Otu esi amata ọnụọgụ kọmputa nke enyere ikike na iTunes
Budata onyonyo niile site na Flickr na FlickMatic